उनको चाक हल्लेको देखेर मलाई खपिनसक्नु भयो – Ekathmandunepal
Homeब्लगउनको चाक हल्लेको देखेर मलाई खपिनसक्नु भयो
२९ मंसिर २०७४, शुक्रबार १४:१९ ekathmandu Nepal ब्लग 0
तपाईं हरु लाई थाहै छ म कहिले काही हाम्रो बुवाको पसल मा बुवा बस्न नपाको बेला मा जाने गर्छु । खानपिन सकेपछी म पून: पसलमा गएर बसें । दिउँसोतिर बुबालाई खोज्दै एउटी सत्ताइस-अठ्ठाइसबर्षकी हेर्दा विवाहित जस्ती लाग्ने, प्वाँट आईमाई पसलमा आएर बुबाको बारेमा निकै सोधेपछी मैले पनि उनीसँग धेरै कुराहरु सोधें । उनी सधैं पसलमा दिउँसोको समयमा आएर भित्रै बसेर पत्र-पत्रिकाहरुपढ्ने गरेको कुरा बताइन् । पसल नजिकै उनको घर पनि रहेछ र उनको श्रीमान् कोरियामा रोजगारी गर्दै रहेछन् तिन बर्षदेखि ।
मैले उनीलाई भित्रै आएर पत्र-पत्रिका पढ्न भनें, बुबाले दिनुभएको सुविधा मैले पनि दिनुपर्छ भन्ने मान्यता मैले राखेको थिएं ।
उनी भित्र आएर बसिन् अनि उनीलाई मन लागेको पत्रिकाहरु झिकेर आफ्नै पसलझैं पढ्न थालिन् । उनले पत्रिका पढ्दै मस्त भइरहेको बेलामा मैले उनीलाई नियालेर हेरें, मंगोलियन परिवारकी तिनी टाइट जिन्स र टि-शर्टमा थिईन । उनको टि-शर्टको गला निकै तलसम्म थियो र
त्यसबाट उनको बुब्सको माथिल्लो भाग निकै पोटिलो देखिएको थियो भने बुब्सको बिचको खोल्सोबाट उनको ब्राको केही भाग स्पष्ट देखिन्थ्यो । हामी कुराकानी गरिनै रहेका थियौं पनि उनको तिघ्रा जिन्सबाटै भएपनि निकै भरिलो र मिलेको देखिन्थ्यो भने पुठ्ठा स्वाभाविक भन्दा केही ठूलो र फैलिएको देखिन्थ्यो । मुडामा बस्दा उनको जिन्सको पछाडीबाट पुठ्ठा बाहिर निस्कन आतुर झैं देखिन्थ्यो, निकै गोरो उनको पुठ्ठामा पेन्टीको माथिल्लो भाग पनि हल्का देखिएको थियो ।
पत्रिका पढ्दै गर्दा उनले घरिघरि आफ्नो बुब्सतिर पनि नियालेर हेर्थिन् र घरिघरि टि-शर्टलाई हल्का मास्तिर तानेर मिलाएझैं गर्थिन् । आधा घण्टा त्यहाँ बस्दा उनले सात-आठ पटक आफ्नो टि-शर्टलाई त्यसरी मिलाउन खोजेझैं गरिन् । तर जति जतिउनी आफ्नो टि-शर्ट मिलाउँथिन् त्यति नै उनको छाती खुलेको मैले अनुभव गरेको थिएं । एकपटक उनले हातलाई टि-शर्टको खुल्ला भागबाट भित्र छिराएर बुब्सलाई समाएर मिलाएझैं गरिन् अनि उठेर भनिन् “
आउनुस् न मेरो घरमा म खाजा ख्वाउँछु ।“ अनि बाहिर निस्केर लागिन् । मैले जवाफमा “हुन्छ आउँला नि?” मात्रै भनें । निस्कने क्रममा उनले दुवै हातले चाकको पुठ्ठालाई समाइकन च्याप्प अठ्याईन्, मैले उनको त्यो हरकतलाई निमन्त्रणाको रुपमा स्विकारें, बाहिर निस्केर उनी पसलतर्फ फर्केर सोकेसमा दुवै पोकालाई टेकाउँदै मतिर फर्केर भनिन् “आउँला नि हैन अहिले नै जाउँ न ?” अनि माथिल्लो दाँतले तल्लो ओंठलाई टोकेजस्तो गरि खेलाईन्, मैले जिस्कदैं भनें “बरु भन्नु न के ख्वाउनु हुन्छ ?” उनको उत्तर थियो “के खाने भन्नु न ? म त्यही ख्वाउँछु नि ?” मैले पनि आफ्नो भित्री ईच्छा जाहेर गर्दै भनें “ख्वाए त के के खाईन्छ खाईन्छ नि ?”
“मलाई नैखाने बिचार गर्नुभा हो कि क्या हो ? त्यो त अलि मेहनत गर्नुपर्छ नि त्यति सजिलै कहाँ पाईन्छ र ?” उनको त्यो स्विकारोक्ति थियो, मैले हात बढाएर उनको हात छुन खोज्दै भने “मेहनत गर्न त म सिपालु पो छु नि ?” उनले मेरो हातबाट छुनु अगावै आफ्नो हात पर हटाउँदै भनिन् “खै निस्कनु न त ? हामी पनि हेरुँ कतिको मेहनती हुनुहुन्छ ?” मेरो लाँडो हल्का ठाडो भइसकेको थियो, म उठें र लाँडोलाई हल्का मिलाएर बाहिर निस्किएं अनि सटर आधा मात्र तानेर उनको पछाडी लागें । हिंड्दा उनले गजबसँग दुवै पुठ्ठा एकापसमा ठोकिने गरि हल्लाइ हल्लाइ हिंडिरहेकी थिइन, म उनीभन्दा केहि पछाडी मात्रथिएं,
मलाई उनको चाक हल्लाई निकै मन परिरहेको थियो, उनले मलाई भनिन् “किन डराउनुभा सँगै हिडौं न आउनु !” र टक्क अडिइन् । जब म उनको समानान्तर पुगें उनी मसँगै हिंड्न थालिन् । सँगै हिंड्दा मेरो नजर उसको छातितिर पुगिरहेको थियो र उनको छाति मजाले हल्लिरहेको थियो जसले गर्दा उनको बुब्स निकै मजाले उभारिएका थिएं । उनको घर पुग्दासम्म हामीबिच केहि बोलचाल भएन
यो पनि पड्नुहोस तिम्रो दाई बिदेश गएका छन , म त साह्रै अत्तिएकी छु बाबु
मलाई पनि एकदमै योवनको मात चढेको थियो अनि (207)
यी पोजिसनहरुमा सम्भोग गर्दा लामो समय सम्म गर्न… (168)
के खाँदा कोलेस्टेरोल घट्छ २ मिनेट समय निकालेर अवश्य पढौं (108)
मेरो मस्त जवानी हेर्न नसक्नेले टीभी बन्द गर्नुहोस् म… (85)
अब जंगलमा पाइने जुकाको मूल्य आकासिने यस्तो छ संकेत,… (74)
आबुई… कति ठूलो यो त मेरोमा छिर्दैन होला ?” (42)
८ घण्टाभन्दा धेरै सुत्नुहुन्छ ? तपाईंका लागि खुसीको खबर छ (41)
आबुई… कति ठूलो यो त मेरोमा छिर्दैन होला ?” (3,203)
बाबु अझ भित्रै, भाउजूले काम्दै भनिन्…देवर भाउजुको… (2,290)